Sidee laptop looga daawan karaa laptop | Androidsis
In kasta oo cabbiraadda laptop-yada si aad ah hoos loogu dhigay sannadihii la soo dhaafay, haddana cabirka shaashadaha Telefishanka ee Smart TV ayaa ficil ahaan u koray si aan xad lahayn, iyadoo la raacayo isla dariiqa loo maro taleefoonnada casriga ah inkasta oo ay si aad u yar u yar tahay, taas oo xusaysa tan inta udhaxeysa 6 iyo 7 inji
Laptops-yada hadda suuqa ku jira waxay na siinayaan cabir shaashadeed oo u dhexeeya 13 inji ilaa 16 inji kiisaska badankood, si kastaba ha noqotee, marka aan dooneyno inaan ku raaxeysano ciyaaraha, filimada ama taxanaha aan ugu jecel nahay si deg deg ah. shaashaddu aad ayey noogu yartahay, ahaanshaha xalka ugu fudud ee telefishanka loo isticmaalo, kuwan oo kale Smart TV oo aad ka iibsan karto PcComponentes.
Si kastaba ha noqotee, waxay u badan tahay in qolka aan joogno, aynaan haysan isku xidhka anteeno, sidaa darteed waxa macquul ah ayaa ah in laga fikiro in xalkaani aanu ku haboonayn baahiyaheena. Laakiin tani maahan arrin tan iyo nasiib wanaag, dhibaato kasta oo la xiriirta kumbuyuutar, waxaa jira xalka 99% ee xaaladaha, kiiskanna ma aha mid ka reeban.
Halkan waxaan ku sharaxeynaa sida aan u awoodno ku xidho laptop-ka Smart TV si aad u aragto waxa ku jira shaashad weyn, haddii aad daawaneysid filimaheena ama taxanaha aan jecel nahay, daawato barnaamij telefishan ama si fudud ula shaqeyn karno shaashad ballaaran si loo furo dhammaan codsiyada aan u baahan nahay.
1 Laptop ku xir Smart TV
1.1 Adeegsiga fiilo HDMI ah
1.1.1 HDMI 1.4 vs 2.0 vs HDMI 2.1
1.2 Laga soo bilaabo dekedda USB 2.0 / 3.0
1.3 Isku xirka USB-C
1.4 Adeegsiga xiriir DisplayPort
1.5 Iskuxirka DVI
1.6 Iyadoo loo marayo Windows 10
2 Ka daawo TV-ga kombiyuutarka gacanta
Laptop ku xir Smart TV
Adeegsiga fiilo HDMI ah
Habka ugu dhaqsaha badan ee laptop-ka loogu xirayo Smart TV waa iyadoo la adeegsanayo a HDMI fiilada. Haddii TV-gaaga xariifka ahi uu leeyahay xallinta FullHD (1920 × 1080) oo ficil ahaan leh fiilo kasta oo HDMI ah waxaad u diri kartaa labada fiidiyow iyo calaamadaha codka Smart TV-gaaga.
Si kastaba ha noqotee, haddii Telefishankayaga Smart uu leeyahay xallinta 4K iyo laptop-keena ayaa awood u leh inuu ku bixiyo qaraarkaas dekedda HDMI waxaan u baahan doonnaa fiilo HDMI 2.1 ah Haddii aan dooneyno inaan si buuxda uga faa'iideysano faa'iidooyinka waxay na siisaa marka la barbar dhigo HDMI 2.0, in kasta oo fiilo HDMI 1.4 ah ay sidoo kale noo shaqeyso.
HDMI 1.4 vs 2.0 vs HDMI 2.1
Halka HDMI 2.0 uu noo ogolaanayo isku xirnaanta 4K ee 60 fps iyo 21: 9 taageero ballaaran, HDMI 2.1 wuxuu na siiyaa 4K, 8K oo ah 120 fps. Ballaadhinta isku xidhka HDMI 2.0 waa 14.4 Gbps oo loogu talagalay 48 Gbps ee isku xidhka HDMI 2.1.
HDMI 2.1 isku xirnaanta waxay la jaan qaadayaan tdhammaan qaababka labadaba maqal (DTS: X, eARC Dolby Atmos…) iyo sidoo kale HDR video. Intaas waxaa sii dheer, waxay ka mid yihiin taageerada howlaha ciyaaraha sida Isbeddelka Isbeddelka Isbeddelka, Habka Laatiinada Hooseeya ...
Waxaan sidoo kale ka heli karnaa aalado leh HDMI 1.4, isku xirnaanta in kastoo ay run tahay inay taageerto isku xirnaanta 4K oo keliya 24 fps.
Laga soo bilaabo dekedda USB 2.0 / 3.0
Haddii laptop-kaaga uusan laheyn xiriir HDMI laakiin uu leeyahay hal ama wax kabadan USB 2.0 iyo wixii ka sareeya, waad iibsan kartaa a USB si adabtarada HDMI ah si aad uga dirto calaamadda kombiyuutarka telefishanka xallinta 1920 × 1080 iyo 60 fps.
Isku xirka USB-C
Xiriirinta USB-C, sida DisplayPort, iyagu waa kuwa ugu horumarsan xagga muuqaalada muuqaalka iyo maqalka. Noocyada noocan ah ee isku xiraya ayaa noo oggolaanaya inaan ka helno labadaba dhawaaqa maqalka iyo muuqaalka, labadaba laptop-ka iyo taleefanka casriga ah oo aan toos ugu xirno telefishankayaga casriga ah.
Adeegsiga xiriir DisplayPort
Qaab kale oo aan ugu xirmi karno Smart TV waa deked DisplayPort. Xiriirinta noocan ah waa inay noqotaa halbeeg warshadeed iyadoo noo oggolaaneysa waxqabad ka badan teknoolojiyada HDMI 2.1. adoo siinaya taageero illaa 16k, taageerida dhammaan HDR iyo qaabab maqal ah, dhowr kormeerayaal isku mar ah ...
Dhibaatadu waxay tahay, in kasta oo aan ka heli karno kormeerayaal suuqa ka jira oo bixiya isku xirnaanta noocan ah, dhinaca kale, helitaanka TV-yada casriga ah ee nooca noocan ah weli wey yara adag yihiin. Sidaa darteed, haddii aad qorsheyneyso inaad iibsato TV cusub oo Smart ah, waa inaad ka fikirtaa mustaqbalka oo aad tixgelisaa taas bixi xiriir DisplayPort, nooca ugu dambeeyay wuxuu ahaa 2.0. Xiriirinta noocan ah waxaa loo isticmaalaa kaararka sawirada kombiyuutarka maadaama ay bixiyaan tayo sarreysa iyo daahitaan yar.
Hab kale oo loogu xiro laptop-keena laptop-ka casriga ah waa iyada oo loo maro dekedda DVI. Si kastaba ha noqotee, ikhtiyaarkan waa in had iyo jeer loo daayaa tan ugu dambeysay kaliya wuxuu gudbiyaa signalka fiidiyowga (qaab analog ah iyo qaab dijitaal ah) laakiin aan ahayn dhawaaqa maqalka, markaa awoodi mayno inaan u dirno codka qalabkayaga telefishanka.
Iyadoo loo marayo Windows 10
Inta telefishanku wuxuu xiriir la leeyahay shabakadeena Wi-Fi kombiyuutarkayaga uu maamulo Windows 10 waxaan awoodi doonnaa inaan si toos ah ugu dirno calaamadda, annaga oo aan adeegsanayn qalab saddexaad ama barnaamijyo kale. Waxaan kaliya u baahanahay inaan tagno baarka hawsha, soo bandhigno liiska ogeysiiska oo aan doorano Mashruuca.
Haddii telefishankayaga Smart TV la jaan qaadi karo, shaashadda ayaa soo bandhigaysa magaca telefishankeenna, taas oo aan u xulan doonno si aan toos ugu dirno waxyaabaha ku jira laptop-kayaga telefishanka.
Haddii fiilooyinka aysan ahayn waxaaga, waxaad isticmaali kartaa Chromecast, aaladda Google ee ku xirta dekedda HDMI ee telefishankaaga oo aad u awooddo dir calaamadaha kooxdaada iyada oo loo marayo xiriirka Wi-Fi. Intaa waxaa dheer, waxay sidoo kale noo ogolaaneysaa inaan ka dirno calaamadda taleefanka casriga ah ee Android TV-ga iyada oo aan wax dhibaato ah.
Miracast ayaa noo oggolaaneysa u soo dir shaashadda qalabkayaga telefishanka casriga ah oo ku habboon teknoolojiyaddan si aad u la mid ah sida Bluetooth-ga u sameeyo. Labada kooxba waa inay la jaan qaadaan tiknoolajiyaddan, haddii kale ma awoodi doonno inaan adeegsanno. Miracast waxay noo ogolaaneysaa inaan u dirno fiidiyow ilaa 1080p oo leh codka ACC iyo AC3.
Haddii taleefankaaga Smart TV uu suuqa ku dhacay 2018, waxaad isticmaali kartaa tikniyoolajiyadda AirPlay (oo laga heli karo moodooyinka Samsung, LG iyo Sony). Tiknoolajiyaddan ayaa kuu oggolaaneysa muraayad shaashadda kombiyuutarkaaga telefishanka adeegsiga tikniyoolajiyaddaan bilaa-waayirka ah iyo nooc kasta oo fiilo ah.
Si aad u gudbiso calaamadaha, waxaad isticmaali kartaa barnaamijka bilaashka ah 5KPlayer, in kastoo xalka ugu fiican laga helo arjiga Aareerver, codsi qiimihiisu yahay 40 euro oo laga heli karo Dukaanka Microsoft.
In kasta oo ay run tahay in Dukaanka Play-ka aan ku haysanno codsiyo tiro badan oo noo oggolaanaya inaan ka daawanno TV-ga casriga ah, barnaamijyadan runtii way midna uma baahna. Haddii aad rabto inaad aragto kanaal dowladeed ama mid gaar loo leeyahay oo si furan uga baxa Spain, waa inaad ka raadisaa Google «Arag magaca channel noolow ".
Natiijada ugu horeysa ee had iyo jeer la soo bandhigo waxay u dhigantaa shabakadda kanaalka waa su'aal, shabakad noo ogolaaneysa inaan si toos ah uga aragno baahinta barnaamijka biraawsarkaaga, iyo inaan mar dambe u diri karno TV-ga Smart-ka ah si aan ugu raaxeysanno waxyaabaha ku jira shaashad ballaaran, illaa iyo inta TV-ga uusan laheyn godka anteenoda
Haddii aadan rabin inaad ka baarto internetka kanaallada TV-ga si aad uga daawato laptop-kaaga, waad ku joogsan kartaa Photocall.TV, degel aad adigu si toos ah uga heli karto baahinta kanaallada badankood ee adduunka, ma aha Spain oo keliya.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » Ka daawo TV-ga kombiyuutarka gacanta
Xiaomi Mi 11 Ultra wuxuu daadanayaa shaashadda labaad ee dhabarka